Global Voices teny Malagasy » Translator Newsletter: Tsy hita maso, voambolana tsy mety adika sy maro hafa! · Global Voices teny Malagasy » Print
Translator Newsletter: Tsy hita maso, voambolana tsy mety adika sy maro hafa!
Voadika ny 20 Jona 2019 3:59 GMT 1	 · Mpanoratra Marianna Breytman Nandika Miranah
Sokajy: Dika, fandikàna-gazety, Mediam-bahoaka, vondrom-piarahamonina, Blaogim-Piarahamonina GV
Miarahaba ny rehetra ato amin'ny GV!
Tongasoa indray amin'ity fizarana Translator Newsletter amin'ity herinandro ity! Androany isika dia hiresaka momba ny…
Piakantsary nalaina tao amin'ny https://medium.com.
Ao amin'ny fiarahamonina mihamitsofoka hatrany ao anaty fanatontoloana, matetika isika ao anaty toeram-piasana tsy voatery miteny anglisy avokoa ny olona ao. Ho an'ireo tsy mpiteny anglisy, matetika fanamby goavana ny fifampiresahana sy ny fahazoana ny hevitr'izy ireo. Nanoratra ity lahatsoratra mahafinaritra  ity ilay mpanaingo UX sady mpampianatra, Molly Clare Wilson, izay mitondra ny lohateny hoe “Mifankazatra: Ahoana no hifandraisana amim-pangorahana amin'ireo tsy mpiteny Anglisy” mba hanampiana ny olona hifampiresaka no sady tsy mifanimba rehefa tsy mitovy ny fahaizana ny teny anglisy. Jereo ary ampahafantaro anay – heverinao ve fa manampy ireo torohevitra ireo?
(Ary misaotra betsaka an'i Georgia Popplewell izay mahatalanjona hatrany noho ny fandefasany ity lahatsoratra ity ho ahy ho an'ny taratasim-baovao!)
Manao tsy hita imaso
Pikantsary nalaina tao amin'ny http://www.thewhig.com/
Rehefa mandika lahatsoratra, ny tanjona hatrany dia ny hahatonga ny vokatra farany ho toy ny tsy fandikan-teny. Mpandika teny Frantsay ho amin'ny teny Anglisy, Patricia Carson Claxton nizara ny traikefany tao amin'ny lahatsoratra iray antsoina hoe “Natao tsy ho hita imaso ny asan'ny mpandika teny “, izay iresahany amin'ny ifantohana amin'ny fanorenana fototra mafy orina amin'ny fiteny ary manome antoka fa ny tanjony voalohany dia ny hifantoka amin'ny “hevitry ny mpanoratra, ny fanehoana an-tsary ary ny safeli-teny. ” Lazao anay – zavatra eritreretinareo rehefa mandika lahatsoratra GV ve ny “mba ho tsy hita imaso”?
Ny majikan'ny voambolana “tsy mety adika”
Pikantsary nalaina tao amin'ny http://www.scientificamerican.com/
Matetika isika miresaka momba an'i Etazonia ho toy ny “melting pot” (dikan-kevitra: fifangaroan'olona), ary toy izany koa, matetika misy teny izay nindramina tamin'ny fiteny hafa ny fiteny Anglisy – teny toy ny “alzebra” sy “zero”, izay samy manana ny fiaviany amin'ny teny Arabo. Ahoana kosa ny amin'ireo voambolana tsy mety adika? Voambolana izay avy amin'ny teny hafa ary tsy mbola nampidirina tamin'ny teny Anglisy. Tim Lomas miresaka izany lohahevitra mahaliana izany ao amin’ity lahatsoratra ity  ary mandefa fanontaniana toy ny hoe: Inona no tanjon'ny teny? Misy ve izany teny tsy mety adika izany? Vakio ary zarao ny eritreritrao!
Inona no TSY TOKONY adika?
Pikantsary nalaina tao amin'ny http://www.translatorsfamily.com/
Fanontaniana hafahafa, sa tsy izany? Azo antoka fa tokony mety adika ny rehetra! Fa araka ny hevitry ny Translators Family , misy fanontaniana vitsivitsy azonao anontaniana ny tenanao raha toa ka misalasala ianao. Vakio ato ny lahatsorany mba hahafantarana ny momba azy ireo sy ireo tranga mety ho hitanao rehefa mety sy tokony tsy adika ny ampahany amin'ny lahatsoratrao.
Midira Lingua Global Voices  ary e!
Toy ny mahazatra, misaotra anareo rehetra noho ny asa mafy ataonareo sy ny fanoloran-tenanareo ho an'ny GV! Raha manana fanontaniana, fanehoan-kevitra na hevitra ianao, dia aza misalasala mandefa mailaka aty amiko ao amin'ny marianna@globalvoices.org.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2019/06/20/140290/
 ity lahatsoratra mahafinaritra: https://medium.com/@mollyclare/taming-the-steamroller-how-to-communicate-compassionately-with-non-native-english-speakers-d95d8d1845a0#.hdcx81xkd
 Natao tsy ho hita imaso ny asan'ny mpandika teny: http://www.thewhig.com/2016/07/20/translators-job-is-to-be-invisible
 ity lahatsoratra ity: http://www.scientificamerican.com/article/the-magic-of-untranslatable-words/
 Translators Family: http://www.translatorsfamily.com/
 ato : http://www.translatorsfamily.com/blog/for-clients/is-there-anything-that-shouldnt-be-translated.html
 Lingua Global Voices: https://globalvoices.org/lingua/translator-application-form/